Uhuru Kenyatta oo la kulmi doona wasiir ka socda Mareykanka | Risala FM-The Voice of Horn Africa
Uhuru Kenyatta oo la kulmi doona wasiir ka socda Mareykanka
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa la filayaa in uu Isniinta dambe kulan wada hadal 2 geesood ah la yeesho wasiiradda arrimaha gudaha ee dalka Mareykanka haweeneyda lagu magacaabo sally jewell.
Kenyatta iyo Jewell ayaa lagu wadaa in ay ka wada munaaqashoodaan arrimo la xiriira dhinaca daryeelka iyo ilaalinta xayawaannada duur joogta ah.
Af hayeenka madaxweyne Uhuru Kenyatta Manoah Esipisu ayaa sheegay in kulankaasi uu ku qotomo dib u eegis lagu sameynayo balan qaad uu horay madaxweynaha Mareykanka Brack Obama ugu sameeyay taageeridda ilaalinta duur joogta qaaradda Africa.
Mid ka mid ah mowduucyada la iskula soo qaadi doona kulanka heerka sare ah ee ay yeelan doonaan Kenyatta iyo Jewell ayaa ah xeeladaha ay Kenya u adeegsatay si ay ula tacaasho khatarta ka dhanka ah xaywaannada.
Dowladda Kenya ayaa lagu amaanay in ay si weyn wax uga qabatay dhibaatooyinka loo geysto duur joogta, waxaana ay suurta galisay in ugaarsiga sharci darrada ah la dhimo ilaa 80%.
Mid ka mid ah tallaabooyinka ugu waaweyn ee ay Kenya u qaaday dhankaasi ayaa ah sharcigii adkaa ee sanadkii 2013-ki loo sameeyay in lagu dhaqo dadka lagu helo dambiyada ku saabsan ugaarsiga sharci darrada ah.
Arrimaha kale ee lagu amaanay xukuumadda Nairobi ayaa ah in ay sare u qaaday tirade ciidamada ilaalada duur joogta, kuwaasoo lagu kordhiyay ilaa 1,000 askari intii u dhaxeysay sanadihii 2013-ki ilaa 2015-ki.
Ciidamada amaanka ee ka howl gala dekedda Mombasa ayaa gacanta ku dhigay foolal badan oo mariidi iyo xayawaanno kale oo ay mamnuuc tahay in la ugaarsado.
Mareykanka ayaa la filayaa in uu ku dhawaaqo taageero kale oo dheeri ah oo arrintaan ku aadan, si uu gacan ugu siiyo howsha ay Kenya u heyso ilaalinta duur joogta.